Kedu ihe bụ ihe otiti iri nke Egypt ▷ ➡️ Chọpụta Online ▷ ➡️
Gịnị bụ ihe otiti iri nke Ijipt
Gịnị bụ ihe otiti iri nke Ijipt. Chineke zigara Ijipt ihe otiti iri ahụ iji taa Fero ahụhụ n’ihi na ọ jụrụ ịtọhapụ ndị ohu Hibru. Ọ bụ naanị mgbe ihe otiti nke iri ka a tọhapụrụ ndị Hibru. Ndia bu ihe-otiti iri ahu:
1 Gịnị bụ ihe otiti iri nke Ijipt dị ka Akwụkwọ Nsọ si kwuo
2 1. Ọbara n'ime mmiri
3 2. Arọ
4 3. Igwu
5 4. Ijiji
6 5. Ọnwụ nke ìgwè atụrụ: Gịnị bụ ihe otiti iri nke Ijipt
7 6. Ọnya
8 7. Ekele
9 8. Lobsters
10 9. Ọchịchịrị: Gịnị bụ ihe otiti iri nke Ijipt
11 10. Ọnwụ nke ọkpara
Gịnị bụ ihe otiti iri nke Ijipt dị ka Akwụkwọ Nsọ si kwuo
Ihe-otiti nke Ijipt Enwere 10 ma ha mere n'usoro a:
Ọbara n'ime mmiri
Ihe otiti nke frogs
Ọnwụ nke ìgwè ehi
Ọnya na ọnya
Igwe mmiri ozuzo
Ọchịchịrị n'elu Egypt
Ọnwụ nke ụmụ eburu ụzọ mụọ
1. Ọbara n'ime mmiri
Ihe otiti nke Ọbara na mmiri
Mgbe Mozis na Erọn rịọrọ ka a tọhapụ ndị Hibru, Fero jụrụ arịrịọ ha. Mgbe ahụ Chineke mere ka mmiri Naịl ghọọ ọbara. Ọ dịghị onye nwere ike ịṅụ mmiri dị n'osimiri ahụ, azụ̀ niile nwụkwara. Ma ndị anwansi Fero jisiri ike mee ka mmiri ahụ ghọọ ọbara ma Fero anapụtaghị ndị Hibru.
“Moses na Erọn wee mee dị ka Jehova nyere n'iwu; o we welie nkpa-n'aka ahu, tie miri ahu nke di na osimiri Nail, n'iru Fero na ndi-orù-ya; miri nile nke di n'osimiri ahu we ghọ ọbara.
Azụ̀ ndị dị n’osimiri Naịl nwụrụ; osimiri Nail we me ka aru di nkpọnkpọ ebe ndi Ijipt apughi drinkua ya. Ọbara we di n'ala Ijipt nile.
Ndi-ode-akwukwọ di nsọ nke Ijipt we me kwa otú a n'aririọ-amara-ha; obi Fero we di arọ́, o geghi kwa ha nti; dika Jehova kwuru.
Ọpụpụ 7: 20-22
Ihe otiti a bụụrụ ndị Ijipt ihe ọjọọ. Osimiri Naịl nọchiri anya ndụ obodo ahụn'ihi na ihe-oriri-ha nile dabere na Ya. Ndị Ijipt na-efe osimiri ahụ, ma ugbu a ọ ghọọla ebe ọnwụ. Chineke gosiri na ọ bụ naanị ya nwere ndụ.
Chineke nyere iwu Moises ka o setịpụ mkpara ya n’elu mmiri nke Ijipt na Ará nārigo nēkpuchi uwa nile. Ma ndi-ode-akwukwọ di nsọ Fero jisiri ike weta awọ n'uwa.
«Ma ọ bụrụ na ịchọghị ịhapụ ya, ebe a, m ga-ata frogs ahụhụ n'ókèala gị niile. Osimiri ahu gāmu kwa awọ, ha gēbili kwa ba n'ulo-gi, bú ime-ulo ahu nke i nāraru ura, na n'elu ihe-ndina-gi, na n'ulo ndi-orù-gi, n'obodo-gi, n'oké ọku-gi nile na n'ihe-ọṅuṅu-gi nile. Ará gārigokwasi kwa gi, biakwasi kwa ndi-gi, na n'aru ndi-orù-gi nile.
Ọpụpụ 8: 2-4
Maka ndị Ijipt, frog na chi nwanyị ọmụmụ. Akara pụtara karịa n'oge idei mmiri nke Osimiri Naịl, ma ọ dịtụbeghị mbụ ọtụtụ frogs pụtara. Kama ịbụ ihe nnọchianya nke ngọzi, Chineke tụgharịrị frog ahụ ka ọ bụrụ nnukwu nsogbu o we weda chi nile nke Ijipt n'ala ọzọ.
Ihe otiti ahihia n'Ijipt
Chineke gwara Mozis ka o were mkpara ya tie ájá, na ogwu, ma ọ bụ fleas, ma ọ bụ ụmụ ahụhụ ndị yiri ya ha pulitere n'aru madu na anumanu n'ala ahu nile. Oge nke a, ndị dibịa afa enweghị ike ime otu ihe ahụ ha we mata omume nke Chineke.
«Ma ndị dibịa afa mere n'otu aka ahụ, na-ewepụ kịta ha incantations; ma ha enweghị ike. Ma nwoke ma anu-ulo di kwa ntà. Ndi-dibia ahu we si Fero, Nka bu nkpisi-aka Chineke. Ma obi Fero di arọ́, o geghi kwa ha nti, dika Jehova kwuru.
Ọpụpụ 8: 18-19
Baịbụl kwuru na ngwere si n'ájá puta. Site n’iwu Chineke, ala ahụ chigharịrị megide ndị Ijipt. DO gosiri na ọ bụ ya nwe ụwa niile.
Chineke zipụrụ ìgwè ijiji bịakwasị Ijipt, bụ́ ndị bibiri ala ahụ. Ma ijiji abanyeghị n’ógbè ebe ndị Hibru bi.
"N'ihi na ọ bụrụ na ị gaghị ekwe ka ndị m na-aga, le, m ga-ezite ụdị ijiji niile n'ahụ gị, na ohu gị, na ndị gị na n'ụlọ gị; ma ụlọ ndị Ijipt ga-ejupụta n’ụdị ijiji nile, na kwa ala ebe ha nọ.
Ma n'ubọchi ahu M'gēkewapu ala Goshen, nke ndim nēbi nime ya, ka ijiji we ghara idi nime ya, ka i we mara na Mu onwem bu Jehova n'etiti ala nka.
+ M ga-etinyekwa ihe mgbapụta n’etiti ndị m na ndị unu. Echi ga-abụ ihe ịrịba ama a.
Ọpụpụ 8: 21-23
Ijiji na-akpata nnukwu ahụ erughị ala ma na-ebunye ọtụtụ ọrịa. Chineke wakporo ahụ ike na nkasi obi nke ndị Ijipt, ma gbaghaara ndị Hibru. Chineke gosiri na ọ na-eche banyere ndị hụrụ ya n’anya.
5. Ọnwụ nke ìgwè atụrụ: Gịnị bụ ihe otiti iri nke Ijipt
Ọnwụ nke anụ ụlọ Egypt
Chineke zitere a ihe-otiti nke b͕uru ndi Ijipt ìgwè inyinya, inyinya-ibu, camel, ehi na aturu n'otù ubọchi. Fero we chọputa ma chọpụta nke ahu ọ dịghị anụmanụ ndị Hibru nwụrụ.
"N'ihi na ọ bụrụ na ị na-achọghị ịhapụ ya, ma ị ka na-akwụsị ya, le, aka Jehova ga-adị n'ahụ gị anụ ụlọ ndị dị n'ọhịa, ịnyịnya, ịnyịnya ibu, camel, ehi na atụrụ, na a nke ukwuu. ajọ otiti. Jehova ga-ekewapụkwa anụ ụlọ Izrel na ndị Ijipt, ka ihe ọ bụla ghara ịnwụ n’ime ihe niile nke ụmụ Izrel.”
Ọpụpụ 9: 2-4
Ndị Ijipt na-eri anụ bụ́ ehi bụ́ isi, tinyere ihe ndị bụ́ isi dị ka mmiri ara ehi, akpụkpọ anụ, na ajị anụ. Ụfọdụ chi ndị Ijipt dị mkpa nwere àgwà ehi. Site na ọrịa a, Chineke wakporo aku na uba Egypt.
Chineke gwara Mozis ka o were ntụtụ ntụ ntụ fesa ya n’ikuku. Mgbe Moses mere nke a, ọnyá na-egbu egbu bilitere n'ahụ mmadụ na anụmanụ. Ọbụna ndị dibịa afa nke Fero bu ọrịa.
“Ha we chiri ntu sitere n'oké ọku, guzo n'iru Fero, Moses we b͕asasia ya n'iru elu-igwe; ma e nwere ihe ọkụ ọkụ nke na-ebute ọnya n'ime mmadụ ma anụ ọhịa. Ma ndi-dibia ahu apughi kwa iguzo n'iru Moses n'ihi nkpọtu ahu;
Ma Jehova mere ka obi Fero di ike, o geghi kwa ha nti, dika Jehova gwara Moses.
Ọpụpụ 9: 10-12
Ọ dịghị chi ọ bụla nke ahụike ma ọ bụ ọgwụgwọ zọpụtara ndị Ijipt n'ọrịa. Chineke gosiri na ya nwere ike n'ebe ahụ ike na ọrịa.
Ihe otiti nke akụ́ mmiri igwe n’Ijipt: Gịnị bụ ihe otiti iri nke Ijipt
Mozis dọrọ Fero aka ná ntị na Chineke na-aga zite oké ifufe nke ákú-miri-ígwé di arọ́ rue Ijipt. Ụfọdụ ndị ndụmọdụ Fero ṅara ntị n’ịdọ aka ná ntị ahụ ma chebe ndị ohu ya na ìgwè atụrụ ya tupu oké ifufe ahụ amalite. Ma ndị niile fọdụrụ n'ọhịa nwụrụ maka ike site na akụ mmiri igwe, tinyere osisi.
“Ya mere, ákú-miri-ígwé di, na ọkụ nke agwakọtakwara ya na akụ́ mmiri ígwé, nke dị ukwuu nke na ọ dịghị mgbe ọ dị n’ala Ijipt dum ruo mgbe e biri ya. Ákú-miri-ígwé ahu we tib͕ue ihe nile nke di n'ọhia n'ala Ijipt nile, ma madu ma anumanu; ákú-miri-ígwé ahu we bibie ahihia nile nke ọhia, tipia kwa osisi nile nke ala. Nání n'ala Goshen, ebe umu Israel nọ, ákú-miri-ígwé nādighi.
Ọpụpụ 9: 24-26
Site na oké mmiri ozuzo Chineke wedara chi Ijipt nke owuwe ihe ubi na ihu igwe ala. Ọbụna ọdịdị na-erubere Chineke isi!
Mozis dọrọ aka ná ntị nke ahụ Chineke ga-ezigara Ijipt igurube ndi-ọdu Fero we riọ ya ka ọ tọpu ndi-Hibru, ka o we ghara ibibi ala ahu ọzọ. Ma Fero wesoro Moses na Eron iwe, chupu ha n'iru ya. Igurube riri nne nke ukwuu nke na ala ahụ gbara ọchịchịrị n'ebe ha nọ. Ebibiri ahịhịa niile fọdụrụnụ.
Ndi-orù Fero we si ya, Rùe ole mb͕e ka nwoke a gāburu ayi ọnyà? Hapụnụ ndị ikom a ijere Jehova bụ́ Chineke ha ozi. Ùnu amaghi kwa na ebibiwo Ijipt?
Chineke bibiri ihe oriri niile dị n’Ijipt. Chi ndị e kwesịrị ime ka e nwee ihe oriri dara. Chineke gosiri na ọ bụ ya na-enye ihe oriri.
9. Ọchịchịrị: Gịnị bụ ihe otiti iri nke Ijipt
Chineke gwara Mozis ka ọ bịaruo eluigwe nso na oké ọchichiri we kpuchie Ijipt ubọchi atọ. Ọ dịghị onye pụrụ ịhụ ma ọ bụ mee ihe ọ bụla. Naanị ụmụ Izrel nwere ìhè.
“Moses we setipu aka-ya n'iru elu-igwe, oké ọchichiri we di n'elu ala Ijipt nile rue ubọchi atọ. Ọ dighi onye huru ibe-ya, ọ dighi kwa onye nēsi n'ọnọdu-ya bilie ubọchi atọ; ma umu Israel nile nwere ìhè n'ime-ulo nile ha.
Ọpụpụ 10: 22-23
A na-ewere ndị Fero dị ka ụmụ chi anyanwụ. Nke a bụ a ọgụ kpọmkwem megide Fero na ike ya nile. Ruo ụbọchị atọ, pharaoh enweghị ike ịrụ ọrụ n'ihi enweghị ọkụ. Chineke gosiri na ya nwere ike niile.
10. Ọnwụ nke ọkpara
N'abalị, Chineke we gabiga n'Ijipt, b͕ue umu-ndikom mbu nke ab͕uru nile nke Ijipt na umu eburu uzọ mu nke ìgwè ewu na aturu nile. Ọ bụ naanị ụmụ Izrel, bụ́ ndị tinyere ọbara ebule ndị ahụ e ji chụọrọ Chineke àjà n’awara ụzọ ha, enweghị ihe efu.
“O wee ruo n’etiti abalị na Jehova gburu ụmụ ọ bụla e bu ụzọ mụọ n’ala Ijipt, malite n’ọkpara Fero nke nọ ọdụ n’ocheeze ya ruo n’ọkpara onye a dọọrọ n’agha nke nọ n’ụlọ mkpọrọ, na ụmụ anụmanụ ọ bụla e bu ụzọ mụọ. Fero we bilie n'abali ahu, ya onwe-ya na ndi-orù-ya nile, na ndi Ijipt nile; oké iti-nkpu we di n'Ijipt, n'ihi na ọ dighi ulo ebe onye nwuru anwu nādighi.
Ọpụpụ 12: 29-30
Ihe otiti nke iri bụ a wakpoo Ijipt nile na odinihu ya. Nwa mbụ bụ isi ihe nketa na ihe ịrịba ama nke ịga n'ihu nke ndị nne na nna. Chineke gosiri na ya nwere ike ọbụna n'ebe ndụ na ọdịnihu.
Mgbe nwa ya nwoke nwụnahụrụ, Fero mesịrị tọhapụ ndị Hibru, bụ́ ndị hapụrụ Ijipt gaa n’ala ahụ e kwere ná nkwa.
Ihe otiti nke Chineke zitere wetara ihe nile dị oké ọnụ ahịa na ihe dị nsọ nye ndị Ijipt. Site n’ịghara irubere Chineke isi, o bibiri ihe nile ha tụkwasịrị obi. Ihe otiti Ijipt gosiri nke ahụ Chineke nwere ike n'ihe niile, na ọ dịghị chi ọzọ.
"N'ihi na ugbu a, m ga-esetịpụ aka m tie gị na ndị ihe otiti gị, na a ga-ewepụ gị n'ala. N’ezie, etinyewo m gị ka i gosi ike m n’ime gị, ka e wee kpọsaa aha m n’ụwa niile.”
Ọpụpụ 9: 15-16
Ụfọdụ n'ime ihe otiti ndị ahụ nwere ike inwe nkọwa sayensị, mana ndị ọzọ doro anya karịa ike. N'iji ma ọ bụ na-ejighi ihe okike, ihe-otiti nke Ijipt bu ihe-ebube, nke mere n'oge kwesiri ya mgbe Chineke nyere ha iwu.
Anyị nwere olileanya na akụkọ a ga-enyere gị aka ịmata gịnị bụ ihe otiti iri nke Ijipt. Ọ bụrụ ugbu a ịchọrọ ịmata ihe mere Chineke ji mesie obi Fero ike, anyị na -akwado ka ị gaa n'ihu na -eme nchọgharị Discover.online.
Olee otú ụgbọ Noa dị
Gịnị mere Chineke ji mee ka obi Fero sie ike?